အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီလုပ်နည်း - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီလုပ်နည်း” က Sara Bruhns နှင့်ယာကုပ် Haqq-Misra ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 5th နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 10.40 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
NASA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အင်္ဂါဂြိုဟ်မှလူသားတစ်ဦးမစ်ရှင်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များင်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ. ဤသည်မှာ NASA ရဲ့များအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ခဲ့ပြီနှင့်၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာအဆင့်သုံးဆင့်အတွက်အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းရှာဖွေရေး၏စိန်ခေါ်မှုများအလေးထားဖေါ်ပြ. ပထမဆုံး, '' ကမ္ဘာမြေလိုင်း '', ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အဆိုပါသုတေသနကိုအာရုံစိုက် International Space Station ကို. စင်မြင့်သုတေသနအတွက်အာကာသသို့နက်ရ​​ှိုင်းတဲ့လူသားတွေကထည့်လေ့မရှိ '' မြေပြင် Proving '', ကမ္ဘာမြေကနေရက်အနည်းငယ်ကျန်ရှိသောနေစဉ်. အဆိုပါ '' ကမ္ဘာမြေလွတ်လပ်သော '' ဇာတ်ခုံအင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်ကိုလူသားတို့ရတဲ့သဖြင့်အစီအစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့.
NASA ကအနီရောင်ကမ္ဘာဂြိုလ်မှလူသားတို့အားပေးပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းကမဖြစ်. SpaceX, Dennis ဟာ Tito ကိုရဲ့ Inspiration Mars Foundation, နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာ အားလုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီပါပြီ.
ဆိုတိုင်းအပြည်ပြည်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအခြေချရှာဖွေထုတ်လုပ်တည်ထောင်ရန်စတင်မလုပ်ခင်, အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးနှင့်အခြေချနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံတကာဥပဒေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းပြီးရပါမည်. အလားအလာကုန်ကျစရိတ်များ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နိုင်ငံရေး, အာကာသအတွင်းအချုပ်အခြာအာဏာဤကိစ္စကိုလျစ်လျူရှုဤမစ်ရှင်အစီအစဉ်များအများကြီးထပ​​်မံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်လည်းမြင့်မား.
current အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအဓိကအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် အာကာသဟင်းလင်းပြင်စာချုပ်အရ, ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ 1967. ဤသည်စာချုပ်အရအာကာသအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပျက်စီးခြင်း၏လက်နက်များကို install လုပ်ဖို့ထံမှ၎င်း၏လက်မှတ်ရေးထိုးတားမြစ်, ငြိမ်းချမ်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မှအာကာသ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်, ဆိုကောငျးကငျအလောင်းတွေမြေဟုဆိုကာထံမှဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုတားမြစ်ထား (ကို 'Non-သင့်တော်ဆီလျော်မှုနိယာမ' 'အဖြစ်လူသိများ), နှင့်အာကာသ '' လူသားအားလုံး၏ပြည်နယ်မှာ '' ကြောင်းအခါကျရင်.
လူသားတွေဟာမွန်းပေါ်ဆင်းသက်ရှေ့တော်၌ထိုအာကာသဟင်းလင်းပြင်စာချုပ်ရေးသားခဲ့, စစ်အေးတိုက်ပွဲတင်းမာမှုများတပ်ဆင်ထားသည်အဖြစ်, ဒါညံ့ဖျင်းအာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေး၏သင်တန်းကိုညွှန်ကြားဖို့တပ်ဆင်ထားသည်. ဒီအစာချုပ်အတော်များများဟာဝါကျခြောလိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပျက်စီးခြင်း၏လက်နက်များ၏တားမြစ်ချက်အဖြစ်, နှင့်သီးသန့်ငြိမ်းချမ်းသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အာကာသများအသုံးပြုခြင်း. သို့သော်, non-သင့်တော်ဆီလျော်နိယာမအားဖြင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တောင်းဆိုမှုများပေါ်တွင်အကြွင်းမဲ့အာဏာကန့်သတ်အနာဂတ်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ခဲ့.
အင်္ဂါဂြိုဟ်မှမဆိုအဆိုပြုထားလူ့မစ်ရှင်များအတွက်ပြည့်စုံသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစဉ်တွင် (အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကရှိမရှိ) ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာနေဆဲ, colonizing ၏အခြေခံရဝုဏ်, ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ဆန့်ကျင်အဖြစ်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေါ်ပေါက်. အဆိုပါအာကာသဟင်းလင်းပြင်စာချုပ်များ၏ non-သင့်တော်ဆီလျော်မှုနိယာမ '' အချုပ်အခြာအာဏာပြောဆိုချက်ကိုအားဖြင့်သင့်တော်ဆီလျော်တားမြစ်ထား, အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်သိမ်းပိုက်အားဖွငျ့, သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ''. ဤသည်မှာကိုလိုနီနယ်ချဲ့ကိုယ်တိုင်က၏လုပ်ရပ်စာချုပ်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်. မည်သို့ဤအဖွဲ့အစည်းအချုပ်အခြာအာဏာကိုအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက််ရှေ့တော်၌အပျေါမှာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုကာမပါဘဲကိုလိုနီဖို့ရည်ရွယ်ထား.
ဒီအဖြေရှင်းရန်တစ်ခုမှာအလားအလာရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုကစီးပွားရေးအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အရင်းအမြစ်များတောင်းဆိုမှုများထက်တပြည်လုံးကိုကိုယ်တိုင်ကအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်. ပြည်သူပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပါတီများကအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကအားလုံးသူမြို့သားများနှင့်ဧည့်သည်များ-ဆင်တူဖို့လျှောက်ထားမည်သည့်အတွက်အခြေစိုက်စခန်းတည်ထောင်စေခြင်းငှါ, နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအုပ်ချုပ်ကြောင်းတည်ဆဲတရားဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းချက်များ. သူတို့ကအစသူတို့သီးသန့်စီးပွားရေးအခွင့်အရေးနှင့်အကငျြ့သိပ္ပံပညာကဆိုကြသည်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်မြေကွက်တစ်ကန့်သတ်ကြံစည်မှုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့. သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သော '' သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံ '' အချုပ်အခြာအာဏာကိုမဆိုတောင်းဆိုမှုများကင်းမဲ့မယ်လို့. မည်သည့်ကိုလိုနီထံမှတစ်ဦးကအင်္ဂါဂြိုဟ်နေထိုင်သူသည်ဤဇုန်မှတစ်ဆင့်ငြိမ်းချမ်းစွာရှောက်သွားစေခြင်းငှါ, နှင့်ပင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နောက်ထပ်အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့. သို့သော်, ထိုဇုန်အတွင်းပါရှိသောအားလုံးထုတ်ယူအရင်းအမြစ်များမူရင်းတောင်းဆိုသူ၏သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်. ဤသည်အဆိုပြုချက်ကိုအများအပြားဟာလက်ရှိအင်္ဂါဂြိုဟ်မစ်ရှင်၏သယံဇာတစုဆောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့တစ်လမ်းပံ့ပိုး, ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များအတွက်အစီအစဉ်များခွင့်ပြုမည်, နှင့်အာကာသဟင်းလင်းပြင်စာချုပ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း.
အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မစ်ရှင်၏တော်တော်များများကထောက်ခံသူများကဆိုထိုကဲ့သို့သောမစ်ရှင်လိမ့်မည်ကြောင်းကန့်ကွက် ပျောက်ကွယ်သွားရတော့မှာအင်္ဂါဂြိုဟ်၏သဘာဝပတျဝနျးကငျြမညစ်ညူးစေ, သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနထိခိုကျအဖြစ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏သဘာဝအလှတရားမာရိသနားသှား. ဤသူတို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်တိုက်ဖျက်ဖို့, ကမ္ဘာမြေရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်စနစ်ကိုဆင်တူတဲ့ဂြိုလ်တွေရဲ့ပန်းခြံ system ကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်. Planetary ပန်းခြံရှိသမျှကိုကျော်ကမ္ဘာမြေသိပ္ပံပညာရှင်တွေ၏ input ကိုအရသိရသည်ဖော်ထုတ်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့အောက်ပါ၏လိုင်းများတစ်လျှောက်သဘောတူညီမှုကိုမော်ဒယ် NASA ရဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာစစ်တမ်းကောက်ယူမှု အာကာသမစ်ရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ခြင်း. တချို့ကပန်းခြံသာသိပ္ပံပညာရပ်ရေးရာမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်, အခြားသူများအင်္ဂါဂြိုဟ် '' သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်သက်သက်သာဗေဒသတ်မှတ်ရေးဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်.
ဤကဲ့သို့သောအစီအစဉ်တစ်ခုအပေါ်သို့သဘောတူရှေ့ဆက်ငြိမ်းချမ်းစွာနညျးလမျးကိုပေးနိုင်တယ်လို့. သို့သော်, အမြဲကိုလိုနီအကြားအသေးအဖွဲပဋိပက္ခများရှိလိမ့်မည်, non-သင့်တော်ဆီလျော်နိယာမကိုလိုနီနယ်ချဲ့များနှင့်အတူကျင်းပရန်အထူးသဖြင့်လျှင်, တိုင်းနိုင်ငံတခုမျှသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဇုံကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်အဖြစ်. တစ်ဦးကယာယီခုံရုံး system ကိုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်တရားမျှတမှု၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ပတျသကျသညျ့မပါဘဲအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်အခြေချအကြားအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းတဲ့နညျးလမျးကောငျးဖြစ်နိုင်ပါသည်. နှစ်ဦးကိုလိုနီအချင်းချင်းပဋိပက္ခသည်သို့ရောက်သောအခါ, သူတို့အမှုကိုသည်အခြားကိုလိုနီကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သောတစ်ခုံရုံးအားဖြင့်ကြားပြေလည်စေခြင်းငှါ,. ဒီ model ကိုလိုနီအကြားသီးသန့်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံရဖို့ကိုလိုနီခေတ်အကျိုးစီးပွားခွင့်ပြု.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရှေ့ဆက်တယောက်ကိုဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်, တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆက်ပြီးမှဘယ်လိုအကြောင်းတစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးထဲသို့မဝင်ရသည်အလွန်အရေးပါသည်. အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလိုနီတည်ဆဲအစီအစဉ်များကိုသူတို့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဟုဆိုကာ၏ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပြီမဟုတ်. သို့သော်အာကာသဟင်းလင်းပြင်စာချုပ်အရမှလူတမျိုးပါတီများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကစာချုပ်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များလိုက်နာရန်လိုအပ်မည်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖြေရှင်းချက် re-examine စာချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အထူးသဖြင့် non-သင့်တော်ဆီလျော်နိယာမ, နှင့်ဤလိုအပ်ချက်ယနေ့တိုင်သက်ဆိုင်ရာလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဖြေရှင်းချက်အတိအလင်းအခြေချတဲ့နည်းလမ်းကိုအပေါ်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်စာချုပ်ပြင်ဆင်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ရေးရာ၏လက်ရှိပြည်နယ်လွန်းစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးနေသည်, ပထမဦးဆုံးလူသားအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရောက်လာမီတကိုလိုနီခေတ်စစ်အစိုးရကအပေါ်သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်နှင့်ပဋိပက္ခလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပုံရသည်.
က Sara Bruhns ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှရူပဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒလေ့လာခဲ့. သူမသည်နှင့်အတူအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး ယာကုပ်အမျိုးကို Haqq-Misra (haqqmisra) ထိုမှတစ်ဆင့် လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင် Program ကို မှာ သိပ္ပံအပြာရောင်စကျင်ကျောက်အာကာသ Institute မှ. ဒီမှာအမြင်များကိုရေးသားသူ '' တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြောင်း.
33201	0 အပိုဒ်, ယဉ်ကျေးမှုကို, ရုပ်ရှင်, အင်္ဂါဂြိုဟ်, Matt Damon, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, အာကာသ
← သင့်ရဲ့ပစ္စည်းများမျက်မမြင်ကိုသင်ဖြစ်၏န, ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်! အမေဇုံ Fire HD ကို 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: မှားယွင်းတဲ့ထောင့်ဖြတ်တောက်တဲ့အကုန်အကျအမှားထေူ →